Angkety Map Manasongadina Fitaovana Nomerika Hamelomana Indray Ny Teny Indizeny Ao Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2016 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, čeština , English, Español, Ελληνικά, বাংলা, English
Ahoana no fomba nampiasana ny fitaovana nomerika hiarovana sy hamelomana indray ny teny ao Aostralia? Inona avy ireo fanamby sy paikady sasany nampiasaina hanalefahana ny olana mety atrehin'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fampiasana izany fitaovana nomerika izany? Ireo ny fanontaniana sasany noresahana tamin'ny tatitra vaovao antsoina hoe “Angkety Map”, izay voambolana avy amin'ny teny Anmatyerr midika hoe “tantara maro”.
Namoaka ity famintinana ity ny First Languages Australia (Teny Voalohany Aostralia), fikambanana manohana ny vondrom-piarahamonina teratany sy ny mponin'ny nosy ao andilan-dranomasina Torres sy ny lafiny rehetra amin'ny fiarovana sy famelomana indray ny teny, taorian'ny tetikasa 15 volana nanangonana ny traikefan'ny mpikatroky ny teny amin'ny fampiasana ny teknolojia nomerika mba hanomezana fianarana sy fahafahana mamelona indray ny teny ho an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo.
Niara-niasa akaiky tamin'ny ekipan'ny First Languages Australia ilay mpikaroka antsoina hoe Ben Foley mba hanadihady sy hitafatafa amin'ireo mpanandra-peo ny fiteny nandritra ireo lanonana marobe momba ny teny sy ny teknolojia manerana ny firenena, tahaka ny Puliima, ny Lahavolana momba ny Teny sy ny Teknolojia ao amin'ny firenena notontosaina tao Melbourne, ary ny Ngirrma Puwal Pukang, Lahavolana momba ireo Tenim-pirenena ao Queensland notontosaina tao Cairns. Naparitaka ihany koa ny fanadihadiana antserasera mba hanangonana vaovao avy amin'ny tsirairay izay tsy nanatrika ireo lanonana ireo, ary nisy koa ny fanadihadiana an-telefaonina natao tamin'ireo foiben'ny teny, ireo mpikirakira ny rindrambaiko, ary ireo mpikatroka hafa mitantana tetikasa momba ny teny eny amin'ny faritra.
Nanasongadina ny fitaovana sy ny votoaty noforonin'ny fiarahamonina ao an-toerana ireo fiarovana ireo, toy ny:
Fampiharana sy fandaharan'asa solosaina ho an'ny fandraketana, fitehirizana, fanazavana, fampirimana ny teny
Fampiharana finday/tablety (raki-teny, rakibolana, lalao mozika, lalao fianarana, tontolo fianarana)
Fitaovana tabilao fotsy ifarimbonana
Media marolafy kapila-mangilatra (CD) na DVD
Fampiharana pejy habaka sy tranonkala (ohatra: YouTube, tranonkalan'ny rakibolana, tranonkala fianarana amin'ny aterineto, sns.)
Rakibolana, lisitry ny teny na feo, bokin'ny fehezanteny, karatra flash ifarimbonana
eBooks (boky amin'ny aterineto)
Lalao amin'ny solosaina
Fandaharana amin'ny radio sy fandraisam-peo
Maro amin'ireo ohatra ireo no nasongadina tao amin'ny tatitra toy ny fanadihadiana ny fomba vaovao fampiasana ny teknolojia ho an'ny fianarana sy ny famelomana indray ny fiteny.
Manantena ny First Languages Australia fa hanampy hitari-dalana ireo mpanapa-kevitra ara-politika amin'ny fanapahana izay laharam-pahamehana amin'ny famatsiam-bola ary koa manamora ny adihevitra eo anivon'ny vondrom-piarahamonin'ny teny mba hanampy hampitombo ny fahafahana mampiasa ny teknolojia, mampihena ny faka-tahaka, ary miatrika ireo fanamby mety hitranga rehefa mampihatra ny fitaovana nomerika.
Trohy ato ny famintinana ny tatitra.
7 andro izayAostralia